ProZ.com translation contests » Propose a source text » Somali source text proposed by Siyad Abdulahi
Taariikhda dagaalkii 1977 Somalia iyo Ethiopia
In dawlada Ethiopia xusto dagaalkii 1977, cabirto Aragtidooda ku aadan dagaalkaas, guulna sheegato wax dhib ah uma arko. Dagaalkii 1977 waa dhacdo ku suntan taariikhda caalamka. waxaase aad ii dhibeysa nasiibdarada kuhabsatay umada soomaaliyeed ee aan wali garan in taariikhdu labo carab leedahay.
Hadaba,kuwa kudoodayo maxuu abiyi axmed uxustay dagaalka oo uu guul usheegtay, waxaa ka habooneyd inay ayagu is weydiiyaan waxa soomaalidu uxusi weyday dagaalka, jabkii kudhacay Ethiopia gunship dagaalka iyo geesiyadii naftood hurayaasha ahaa ee ku dhintay dagaalka.
waa taariikh kooban oo ku saabsan xuskii Ethiopia ay xustay guushii kaaraa mara taas oon sal iyo raad lahayn
Waxaasi wa iska afka caaradiisa lkn mardhow waykabixi Somalia wajigan inshlh